Ukuthengiswa kwezindlu kunye ne-NJ kunye ne-NY yeNdawo yokuThengisa, ukuKhuselwa, ukuKhuselwa kweNdawo kunye nabaGcini beMithetho yokuThengisa
ikhaya / Izindlu ezithengiswayo
Singuye Ifemu yomthetho wokuthengisa izindlu nomhlaba abamele abathengi eNew Jersey naseNew York. Ifemu yethu imele abathengi kunye nabathengisi. Siyaziqonda iimvakalelo ezingqonge ukuthengisa ikhaya, nokuba kungokufudukela kwikhaya elikhulu okanye ukuyeka ikhaya labantwana ngexesha lenkqubo ye-probate.
Siyakuqonda ukuthengiswa okufutshane kunye nendlela yokwenza ukuba yenzeke. Sisebenza nabantu ngokubona kwangaphambili xa ukhetho lwabo olushiyekileyo luthengisa ikhaya labo. Sinethiwekhi yomnxibelelanisi weeRealors, abatyali mali, kunye neeBroker Brokers esinokufumana kuzo ukuba ufuna uncedo. Sisebenza ngokuthengisa kunye nokuthengisa. Simele abathengisi kunye nabathengi kumacala omabini otshintshiselwano lweshishini kwaye siqonde iimfuno zabaxumi bethu kwezi meko.